Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Riyad oo shir balaadhan ku go’aansaday in halganka loo midoobo
Jaaliyadda Riyad oo shir balaadhan ku go’aansaday in halganka loo midoobo
Waxaa shir aad ubalaadhan isugu yimid faraca jaliyada Riyaad ee dalka Scauudiga Carabta. Shir kan oo dhamaan bulshada Riyaadh iyo nawaaxigeeda la’saga yimid ayaa waxaa lagu furay sidii caadada inoo ahayd aayadaha quraanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Sh. Axmad Maxamad Cali oo uu ku bayaamiyay Alla ka cabsi iyo in midnimada la ilaaliyo oo halganka la’isaga caabinayo dulmiga gumaysiga meel looga soo wada jeedsado.
Shirka waxaa daadihinayay gudoomiyaha jaliyada mudane Guuleed Wali Jaanyar, waxaana lagaga wadatashanayay wax qabad jaaliyadda iyo taageerada halganka xaqa ah iyo sidii loo dardar galin lahaa waxqabadka xubnaha jaliyada Riyaad.
Ka dib markii si aad ah loo falanqeeyay ajendahii shirka waxay dhamaan xubnahu canbaareyn u soo jeediyeen gumaysiga hawsha ay ku bilabeen dadka shacabka iyadoo xilli adag oo diraac ah lamarayo taasoo lagu boobayo hantida yaree ay haystaan markii uu bilaabay gumaysiga inuu ka qaado waxay ugu yeedheen Gibir oo ah baad dadka shacabka laga qaadayo iyaga iyo xoolahooda. Waxay xubnihii shirka fadhiyay ay hoosta ka xariiqiin inay meel uga soo wada jeedsadaan wax qabadka halganka kana digtoonaadaan shirqoolada qorba joogta loo soo safriyay ee meel walba ku fashilmay. Wuxuu shirka ku soo gabagaboobay guul iyo is-afgarad.